“Mbola ho Vavolombelon’i Jehovah Foana Aho” | Diary 2015
TANTARANY Mbola tanora izy no nahita ny fahamarinana, ary tsy nilavo lefona na teo aza ny fanoheran’ny fianakaviany sy ny Eglizy ary ny fanjakana.
KATOLIKA nafana fo aho taloha. Anisan’ny antoko-mpihira aho tamin’izany, ary nanaraka ny pretra tany ambanivohitra rehefa nanao Lamesa tany ry zareo. Nilaza tamiko ny zokiko vavy, tamin’ny 1955, fa hisy paradisa amin’ny hoavy. Nomeny Baiboly aho ary nomeny an’ilay bokikely hoe “Ity Vaovao Tsaran’ny Fanjakana Ity” sy ilay boky hoe “Aoka Andriamanitra no ho Fantatra fa Marina.” Tena tiako ilay izy ka nanontaniako ny mompera, raha mahazo mamaky an’ilay Baiboly aho. Nilaza izy fa ho lasa “adala” aho raha manao an’izany. Novakiko ihany anefa ilay izy.
Nifindra tany amin’ny dadabe sy bebenay tany Boca Chica aho, tatỳ aoriana. Nanontany ahy ny mompera iray hoe naninona aho no tsy niangona. Dia hoy aho: ‘Betsaka tsinona ny zavatra ampianarin’ny Eglizy tsy mifanaraka amin’ny Baiboly.’ Tezitra be ilay mompera ka nivazavaza hoe: “Ondry nania mihitsy ianao, ka tsy anisan’ny ondriko intsony!”
Dia hoy aho: “Ianao no nania fa niala tamin’ny ondrin’i Jehovah. I Jehovah ange no tompon’ny ondry fa tsy olona e!”
Tsy niangona intsony aho. Nifindra tany amin’ilay zokiko vavy aho, ary natao batisa tsy ela taorian’izay, izany hoe enim-bolana monja taorian’ny nandrenesako ny fahamarinana voalohany. Tonga aho dia nanao mpisava lalana maharitra. Nanambady an’i Enrique Glass aho herintaona tatỳ aoriana. Mpiandraikitra ny faritra izy tamin’izany. Nosamborin’ny polisy i Enrique, indray andro, tamin’izahay nitory tao amin’ny zaridainam-panjakana tany La Romana. Rehefa nentin-dry zareo izy, dia nanenjika azy ireo aho sady niteny hoe: “Fa maninona aho no tsy entinareo? Izaho koa ange Vavolombelon’i Jehovah e! Izaho koa ange nitory e!” Tsy te hisambotra ahy anefa ry zareo.
Efa nigadra fito taona sy tapany i Enrique teo aloha, raha atambatra ny saziny. Voaheloka higadra herintaona sy valo volana indray izy tamin’io. Namangy an’i Enrique foana aho isaky ny alahady. Indray alahady, nisy lehiben’ny fonja nanontany ahy hoe: “Fa inona no ataonao atỳ?”
Dia hoy aho: “Migadra ato tsinona ny vadiko fa Vavolombelon’i Jehovah!”
Hoy izy: “Aza mandany fotoana miaraka amin’ireny Vavolombelon’i Jehovah ireny! Ianao ange mbola tanora e! Mbola manana ny hoavinao ianao.”
“Izaho koa ange Vavolombelon’i Jehovah e! Ary na hovonoinao impito aza aho ka hatsanganao impito, dia mbola ho Vavolombelon’i Jehovah foana.” Leo be izy ka noroahiny aho.
Nanao ny asan’ny faritra sy vondrom-paritra nandritra ny taona maro izahay mivady, rehefa tsy voarara intsony ny asan’ny Vavolombelon’i Jehovah. Nodimandry i Enrique tamin’ny 8 Martsa 2008. Izaho kosa mbola mpisava lalana maharitra hatramin’izao.